ISilo sihlabe imicimbi ewubukhazikhazi yokubuyisana | News24
LAST UPDATED: 2017-12-17, 18:07
ISilo sihlabe imicimbi ewubukhazikhazi yokubuyisana
PHOTO: ian carbuttISilo samaBandla uGoodwill Zwelithini kade sifika eRoyal Showgrounds sizokwethula inkulumo yaso yokuvula isiShayamthetho sesiFundazwe.
ISILO samaBandla uGoodwill Zwelithini sihlikize eyemicimbi ewubukhazikhazi kahulumeni yokuzama ukuthunga ubumbano kuleli kepha imiphumela yawo ingabonakali.
ISilo besethula inkulumo yaso eyandulela ekandunankulu wesifundazwe yokuvulwa ngokusemthethweni kwesiShayamthetho eRoyal Showgrounds ngoLwesibili.
IMbube ithe udaba lokubuyisana lungezinye zezigqinamba ezibhekene nelakuleli njengoba kuba nezibhedu zokucwasa ngokobuhlanga eziqubukayo.
“Mabili amagama asetshenzisiwe ukuzama ukuthunga umphakathi owakhele iNingizimu Afrika. Igama lokuqala ngu Reconciliation okusho ukubuyisana. Elinye elisanda kuchuma okuthiwa ngu Social Cohesion nakhona esibone izinhlelo eziningi ebeziqhutshwa nguhulumeni nezinhlangano ezingekho ngaphansi kwakhe. Uma sineqiniso kumele sivume ukuthi okwamanje lezi zinhlelo zombili zisahlulekile ukusiwelisa ngokuphelele esikhathini esiphuma kuso.”
Eqhuba oNgangezwe Lakhe uthe lezinhlelo esezikwazile ukukwenza ukuthi abantu bakwazi ukubekezelana kepha bayahluleka ukwamukelana.
“Uhulumeni kanjalo nezinhlangano ezingekho ngaphansi kwakhe kumele batuswe ngesifiso sabo sokuba kube nokubuyisana ezweni. Nokho kumele bakwamukele ukuthi ukubuyisana lokhu akuyona imihlangano ebanjelwa emahhotela noma emahholo. Ukubuyisana kusho ukuhambelana, ukwazana nokwamukelana kwemiphakathi. Ngamafuphi ngithi, ake kumiwe ngemicimbi ewubukhazikhazi okuthiwa kuyokhulunywa ukubuyisana kuyo, ake kuyiwe kubantu abanenkinga ukuze kugqugquzelwe ukwemukelana.” ISilo siphinde sakhala ngabaholi abafezekisa izinhloso zabo kuqala babeke abantu emuva.
“Cishe zimbili izinhlobo zosopolitiki, kukhona labo abanendaba ngokhetho oluzayo, bese kuba khona labo abanendaba ngesizukulwane esizayo.
Inkinga yaloluhlobo lokuqala wukuthi kalunendaba nokunye, ukucabanga nokwenza kwalo kuncike eminyakeni emihlanu. Lingasha izwe ngonyaka wesithupha yena ubuka kule emihlanu. Ngeshwa loluhlobo yilo oluningi nolunamandla ngoba kulo umlomo yishoba lokuziphungela.”
Sichaza labaholi sithe bagweve nezikhundleni futhi kungachitheka igazi kunokuba kuphume bona.
“Kubo umasipala ungawa inqobo nje uma lokho abafuna ukukuzuza eminyakeni leyo emihlanu kuzokwenzeka. Ngesabo isikhathi ohulumeni bangena ehlazweni ngoba bona kabanendaba nesithunzi sikahulumeni, okwabo wukubheka lokho okuyinzuzo kuleminyaka emihlanu abaqokelwe kuyo.”
Siqhube ngokuthi isifundazwe saKwaZulu Natali sidinga abaholi abangeke bavume ukuba izwe lifele ezandleni zabo. Siphinde sabalula nezinhlaka zobuKhosi nazo esithe sezingenwe wumdlavuza wenkohlakalo.
“Kuthengiswa iziza ngomgunyathi, kwenye inkathi umkhonyovu ufaka ngisho izikhulu zikahulumeni nosopolitiki kwenza kube lukhuni ukukholwa ukuthi abanye balaba bantu kubafanele ukuba babe yingxenye yobukhosi.”
More photos on page 26
LIVE: #ANC54 - Delegates sing as they reject Mbete’s call to allow nomination for top 6